मलेसियामा दिल साट्नेहरू - Myagdi Online
गुल्मीमा जन्मेका तर तन्नेरी जीवनको आधा समय मलेसियामा दु:खको अँध्यारो गर्तमा बिताएका गुल्मीका राजन थापा, ३७ लाई यस्ता कुराको ‘छु मतलब’ । क्वालालम्पुरबाट करिब ३० किलोमिटर परको ग्यान्टिङ हाइल्यान्डको सानो पहाडी थुम्कोमा करिब १५ वर्षयता पहाड खोस्रिरहेका उनलाई दायाँ–बायाँ सोच्ने त फुर्सदै छैन ।
उनी जहाँ बस्छन्, त्यहाँबाट आकाश खुला भएका बेला नियालेर हेर्‍यो भने क्वालालम्पुरको छेउछाउमा अग्लिरहेका अट्टालिकाहरू देख्न सकिन्छ । तर पहाडको उचाइमा बसेर हेर्दा ती सबै होचा र पुड्का लाग्छन् । आफ्नै दु:खको अग्लो पहाडमा उभिएपछि पराई देशको विकास र चमकधमकजस्तो लागे पनि के अर्थ ?
झन्डै १४ वर्षयता स्वेदश नर्फकी यहीको पहाडी थुम्कोको माटो खोस्रिरहेका उनी बासको टेकोमा फ्लेक्स प्रिन्टले बारेर सानो कटेरोजस्तो घर बनाएर बसेका छन् । त्यही नजिकै उनले एक जना चिनियाँका २ हेक्टर जमिन वार्षिक पाँच हजार रिंगिट अर्थात् करिब एक लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा भाडामा लिएका छन् ।
जहाँ उनी मौसमअनुसार खुर्सानी र सिमी फलाउँछन् । मौसमको जस्तै खेतीको पनि केही भर हुन्न भन्ने कथ्य सुनाउँदै राजन केही बेर थकथकाए । कारण के परेछ भने, केही दिनअघि मात्रै परेको ठूलो झरीेपछि उनको सिमी बारीभरि कीराहरू सलबलाएछन् र सप्पै सिमीको बोट नासिएछन् । उनले सानो स्वरमा भने, ‘झन्डै दुई/तीन हजार रिंगिटको लगानीखेर गयो ।’
ग्यान्टिङ आएपछि राजनको जीवनमा पहिलेजस्तो भागदौड त छैन । तरकारी खेतीबाट हुने नाफा घाटाको हिसाबकिताबले पनि उनलाई त्यति धेरै पिरोल्दैन । तर उनको मनमा भने स–सानो आँधी तुफान हरदम मच्चिरहन्छ । उमेरको उपल्लो विन्दुमा पुगेकी बूढी आमाले जब घरबाट फोन गरेर ‘कहिले आउँछस् नेपाल ?’ भनेर सोध्छिन् तब उनलाई आपत् पर्छ । दिव्य १५ वर्षमा नेपाल कति बदलियो होला ? आफ्नो गाउँ कस्तो भयो होला ? आमाको गालामा कति चाउरी परे होलान् ? राजनलाई केही थाहा पत्तो छैन ।
उनीसँग केही अनुमान त छन् तर त्यसका केही आधारहरू छैनन् । आफू मलेसिया आएपछि गाउँमै बितेका बाको सम्झना त राजनको स्मृतिमा मधुरो हुन आँटिसक्यो । उता बा बिते, यता राजन गैरकानुनी हैसियतमा थिए । बाको किरियाकर्ममा पनि सामेल हुन नपाएको छटपटी पनि अब त वर्षौं पुरानो भइसक्यो ।
दलालको पासोमा परेर, भनेजस्तो काम नपाएर र कम्पनी छोडेर गैरकानुनी कामदार भएका धेरैजसोको व्यथा राजन र घलेको जस्तै घनचक्करमा अल्झिएको छ । सात वर्षअघि धादिङका डिलकुमार तामाङ एक लाख ८० हजार रुपैयाँ दलाललाई बुझाएर मलेसिया आएका थिए, क्लिनिङ कम्पनीमा काम गर्ने भन्दै ।
ओभरटाइमबाहेक नौ सय रिंगिट तलब पाइने दलालको वाचा झूटो भएको थाहा पाएपछि उनी कम्पनी छाडेर अनेक ठाउँं भांैतारिंदै हिँडे । केही वर्ष भाग्दै र लुक्दै अनेक ठाउँमा काम गरेपछि उनी साढे दुई वर्षअघि ग्यान्टिङ आइपुगे । ४ हेक्टर जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती थालेका डिल्ली अहिले डेढ वर्ष जेठी इन्डोनेसियन केटी सुकीसँग घरजममा छन् । मासिक तीसदेखि ३५ हजार औसतमा कमाउने डिल्ली आफ्नो कमाइबाट सन्तुष्ट छन् । तर उनको पीरको पारो भने त्यतिबेला उक्लिन्छ, जतिबेला उनकी घरवाली सुकी इन्डोनेसिया नै जाम भनेर करकर गर्छे ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियामा ४ लाख ८५ हजार नेपाली कामदारहरू रहेको सरकारी रेकर्डमा छ । तर दूतावासका अनुसार गैरकानुनी हैसियतका रहेका नेपालीहरू पनि जोडने भने भने यो संख्या करिब सात लाख पुग्छ । जसमा मलेसियाका विभिन्न पहाडी भूभागका पशुपालन र तरकारी खेती गरेर वर्षौदेखि लुकीछिपी काम गरिरहेका राजन, चोक्ता र घलेजस्ता कामदारहरू पर्छन् ।
नेपाली कामदारको सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको मलेसियाको चमकधमकमा उनीहरूको कथा कतै हराइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मलेसियाबाट ६८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल भित्रिने यस्तो रकममा राजनजस्ता गैरकानुनी कामदारको दु:ख र हैरानीको कथा मिसिएको छ ।
म्याग्दी जलजला परिवारमा फेरि भण्डारी 1 महिना, 22 दिन अगाडि
सर्वाधिक धनराशीको सीपीए कप भलिबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा 1 महिना, 22 दिन अगाडि
एनआरएनए अमेरिकाको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा म्याग्दीका अमर छन्त्याल विजयी2महिना,3दिन अगाडि
मोना कतारको बहुउदेश्यीय अक्षयकोषमा साँस्कृतिक कार्यक्रमबाट ६ लाख जुट्यो2महिना, 17 दिन अगाडि
नयाँ अभ्यास सहित सम्पन्न भयो मोना कतारको साँस्कृतिक कार्यक्रम (फोटो फिचर)2महिना, 26 दिन अगाडि
जनसम्पर्क समिति पोर्तुगलका उपाध्यक्ष केसीको पहलमा दृष्टिविहिन विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग (फोटो फिचर)2महिना, 26 दिन अगाडि
सुत्केरी भैसीलाई भत्ता ! 43 मिनेट अगाडि